FINIAVANA HAMBOLY KORONTANA : Tra-tehaky ny mpitandro filaminana ny « cocktail molotov » nentin’ny K25
Tra-tehaky ny mpitandro ny filaminana tamin’ny sabotsy lasa teo ny fikasan-dratsy hamboly korontana nataon’ny K25, tetsy amin’ny kianjan’ny 13 Mey. 6 janvier 2019
Araka ny fantatra dia lehilahy iray nitondra moto scooter no nahatratrarana cocktail molotov tamin’io andro io. Tratra niaraka tamin’ity lehilahy ity ihany koa rehefa natao ny fisavana ireo karatra maromaro izay nampiseho ny maha mpikambana azy eo anivon’ny K25 na ny Kômity mpanohana ny kandida laharana faha-25.
Mazava ho azy, araka izany, fa tsy mitsahatra mandrisika ny olony hanao fihoaram-pefy Ravalomanana Marc. Raha iny fihetsika mamoafady iny no fakafakaina dia toa iniana volena eto amin’ny firenena hatrany ny korontana ary fofoina hatramin’ny ain’ny Malagasy mihitsy handrombahana fahefana. Raha tsiahivina, vao nanomboka ny hetsika nataon’izy ireo dia efa nampiaka-peo ny avy eo anivon’ny Prefektiora fa hetsika tsy nahazoana alalana io nataon’izy ireo io, mety hiteraka korontana ka tokony efa ela no natsahatra ary tsy tokony notohizana intsony.
Tsy hita mazava rahateo izay antony mbola hanaovana fitokonana satria efa nanokatra ny varavarany tamin’ny fihainoana sy ny fandraisana ny fitorian’izy ireo ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana na ny HCC. Raha matoky tena sy mikatsaka ny hisian’ny filaminana sy fitoniana ara-pôlitika marina ny K25 sy Ravalomanana Marc dia tokony ho izy tenany mihitsy no hanome baiko ireo mpitari-tolona mba hampitsahatra tsy misy hatak’andro ny fihetsiketsehana rehetra na amin’izao iray andro mialoha ny hamoahan’ny HCC ny vokatra ôfisialy izao na aorian’io vokatra ôfisialy rahampitso io.